“စင်္ကာပူက တက္ကစီသမားကြီး ပြောတဲ့ သူ့ အတွေ့ အကြုံ” ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 7:46 PM | No မှတ်ချက် | Aung MyoFollow
ဒီည..အင်ဒိုနီးရှားက စင်္ကာပူ အပြန်..လေဆိပ်ကနေ အိမ်ကိုအသွား တက္ကစီပေါ်မှာ taxi driver ကြီးနဲ့စကားစမြည် ပြောဖြစ်တယ်..driver ကြီးလုို့ ပြောရတာက သူက အသက် ၇၀ ကျော်လောက်ရှိပြီ။
ကျနော့် ကို မြန်မာ မှန်းသိတော့ သူကပဲ စပြောတယ်..“အခု မြန်မာမှာအစိုးရ
အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပြီ ဆိုတော့မြန်မာပြည်က အမြန်ဆုံးတုိုးတက်တော့ မှာပေါ့ ” တဲ့ ..သူကဆက်ပြောတယ် “ကျုပ်ထင်တယ်..မြန်မာနုိုင်ငံက သယံဇာတ တွေ ကြွယ်ဝတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ချွေချွေတာတာလုပ်ရင် စင်္ကာပူတုိုးတက်တာထက် ပိုမြန်လိမ့် မယ်၊နောင် ၁၅နှစ်..အနှစ် ၂၀ အတွင်း စင်္ကာပူလုို ဖြစ်နိုင်လိမ့် မယ်” လို့ .. သူကပြောတယ်.ဗျ..
ဒါနဲ့ ကျနော်က ဆက်လျှာရှည်မိတယ်..”စင်္ကာပူနုိုင်ငံ ထူထောင်စကရော ချွေတာခဲ့ရသလား”. လို့ ။ အဲဒီတော့ . သူက.. ”ချွေတာခဲ့ရတာပေါ့ ဗျာ.. မစ္စတာလီကွမ်ယူးက ကျုပ်တို့ ရနေတဲ့လစာရဲ့၃၀% ကို ဖြတ်ပစ်လုိုက်တယ်ဗျ။ ၅နှစ်တောင်ပဲ”.. တဲ့။
ဒါနဲ့ ကျနော်က “လူအများစုက သူ့ ကိုသဘောကျတော့ဒီလိုလစာဖြတ်တာကို လက်ခဲ့ ကြမှာ ပေါ့ နော်” လို့ ဆုိုတော့ ..”ဟာ..ဘယ်ဟုတ်မှာလဲဗျာ..ကျုပ် အပါအ၀င် အများစုက ဘယ်ကျေနပ်မှာလဲ.အင်္ဂလ်ိပ်အစိုးရလက်ထက်ကမှ ပေါပေါများများ သုံးရသေးတယ်.. ကို်ယ့် အစိုးရ နဲ့ ဖြစ်လာမှ ချွေချွေတာတာ သုံးနေရတယ်ဆုို ပြီး တော်တော်များများက ပွစိပွစိ ပေါ့ ”..
"အဲဒီတော့မစ္စတာလီကွမ်ယူးက လိုိုက်လျှောခဲ့ သလား” လို့ ကျနော် သိချင်တာကို ဆက်မေးဖြစ်တယ်..သူက “ဘယ်လိုက်လျှောမှာလဲဗျာ.သူက တုိုင်းပြည်အနေနဲ့ ရေရှည် ကောင်းဖုို့ အမြဲ စဉ်းစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုး၊ သူဆုံးဖြတ်တာတွေ အပေါ် မှာ firm ခိုင်ခုိုင်မာမာ ရပ်တည်လေ့ ရှိတယ်။တကယ်တော့တိုင်းပြည်တခု တိုးတက်ဖုို့ က နောက်၁၅နှစ်..အနှစ် ၂၀ မှာတုိုင်းပြည်ကောင်းအောင် လှမ်းမျှော်ကြည့် တတ်တဲ့Vision ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုး ပဲလုို တာပါ..တဲ့။